अर्थ – AB Sansar
September 24, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on आज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडाैं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य रु ६०० ले घटेकोे छ। छापावाल सुन बिहीबार रु ८९ हजार ६०० मा कारोबार भएको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८९ हजार र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८८ हजार ५५० कायम गरिएको छ। तेजाबी सुन बिहीबार प्रतितोला रु […]
July 23, 2021 santoshLeaveaComment on राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेशl
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७’ पेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन १२ गते अपराह्न १ः०० बजे बस्नेछ ।
July 22, 2021 santoshLeaveaComment on शिल्पाका श्रीमानले यि नायिकालाई पनि गरेका रहेछन् शोषण भन्छिन : मेरो इच्छा बिपरित काम गर्न बाध्य पारिन्थ्यो !
काठमाडौँ । बलिउड नायिका शिल्पा सेट्टीका श्रीमान् जति बद्नाम अहिले को भएको होला र रु उनको कुर्कमको फल उनले पाउन थालेका बेला मोडल तथा नायिका पूनम पाण्डे पनि राज कुन्द्राको बारेमा थप रहस्य खोलेकी छिन् । व्यापारी राज कुन्द्रा अश्लि ल भिडियो बनाउने र बेच्ने गरेको आरोपमा समातिएसँगै उनका एकपछि अर्क रहस्यहरु बाहिर आइरहेका बेलामा […]
सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या दोब्बर वृद्धिl
July 21, 2021 santoshLeaveaComment on सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या दोब्बर वृद्धिl
चितवन । जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या बढेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार झण्डै दोब्बर सङ्ख्याले दुर्घटना बढेको हो । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा ४३५ दुर्घटनामा भएका छन् । अघिल्लो आवमा २६१ सवारी दुर्घटना भएका थिए । गत आवमा दुर्घटना बढेसँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्यासमेत बढेको छ । […]
June 28, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ४ सामान्य गल्ती !
काठमाडौँ । धन सम्पतीको जोहो गर्न र यसको बचत गर्न अनेकौं प्रयासका बावजुद सफल भइरहनु भएको छैन रु वा तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यी अनेकौ समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईलाई लक्ष्मीको कृपा भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ। लक्ष्मी प्रसन्न भए वा दाहिना भएमा मानिसलाई कहिल्यै धनसम्पति, रुपैयाँ पैसाको अभाव हुँदैन। यस्तोमा देवि लक्ष्मीलाई […]
June 17, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्मलाई थप
सरकारले कर तिर्नका लागि समयसीमा तोकेको छ । बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै असार २५ गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गरेको हो ।आन्तरिक राजस्व विभागले कोभिड नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न असहजता भएको भन्दै असार २५ गतेसम्मको समय थप गरेको हो। २०७७ चैत र ०७८ को वैशाख महिनाको मासिक तथा […]
June 14, 2021 santoshLeaveaComment on जर्मनीले नेपाल सरकारलाई प्राविधिक सहयोगस्वरुप चार अर्ब ८० करोडभन्दा बढी अनुदान प्रदान गर्ने
काठमाडौँ — जर्मनीले नेपाल सरकारलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगस्वरुप चार अर्ब ८० करोडभन्दा बढी अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।नेपाल र जर्मनीबीच जारी द्विपक्षीय सहयोगअन्तर्गत सन् २०२३ सम्म प्राविधिक सहयोग तथा सन् २०२५ सम्म वित्तीय सहायतालाई निरन्तरता दिन जर्मन सरकारले अनुदानस्वरुप उक्त रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत […]
May 29, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on पशुपतिलाई ३५ करोड बजेट
पशुपति क्षेत्र विकास संरक्षण गुरु योजना विस्तारका लागि सरकारले ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । शनिबार बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो जानकारी दिएका हुन् ।
भोलिदेखि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने
May 24, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on भोलिदेखि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने
सरकारले मंगलबारदेखि आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्ने भएको छ । ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र मार्फत सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम चौमासिकमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने जनाएको छ । ९१, १८२ र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलबाट ६९ अर्ब ५० करोड […]
आज सुनको मुल्य तोला मा 20 हजारले घटयो
May 21, 2021 santoshLeaveaComment on आज सुनको मुल्य तोला मा 20 हजारले घटयो
नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । मंगलबार तोलामा रु ९३ हजार ४०० मा कारोवार भएको छापावाला सुन बुधबार रु १०० घटेर तोलामा रु ९३ हजार ३०० मा कारोवार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो ।यस्तै बुधबार तेजाबी सुन तोलामा रु ९२ हजार ८०० मा कारोवार भएको छ । त्यसैगरी आज […]